June 2008 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 6/19/2008 03:43:00 PM
Q. အရှင်ဘုရား…ဦးတင်ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရားဖြစ်ရန် ဖြည့်ကျင့်တော်မူရသည့် ပါရမီတော်တို့ကို သိရှိကြည်ညိုလိုပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်နှင့်တကွ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရော ပါရမီနှင့်ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြချက်များ ရှိပါသလား။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလာ ပါရမီများနှင့် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလား ပါရမီများ တူညီမှု၊ သို့မဟုတ် ကွဲပြားမှု ရှိပါသလားဘုရား။ နောက်တစ်ခု မေးခွင့်ပြုပါဘုရား။ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ဟာ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားများတွင် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားဖူးပါသည်။ တစ်ခြားပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်များကိုလည်း ရှင်းပြပေးပါဦးဘုရား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား။
A. ၁။ ပါရမီဆိုတဲ့စကားဟာ ပါဠိစကားဖြစ်ပြီး အထွတ်အမြတ်၊ မြတ်သောသူ၏အဖြစ်၊ မြတ်သောသူ၏ ဥစ္စာ၊ နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့် စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ ဖြည့်ကျင့်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်လိုက်ပြီး ဖြည့်ကျင့်ရတဲ့ ကာလဟာ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဘုရားဖြစ်လိုသူများအတွက်ဆို လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလတိုင်အောင် ပါရမီတော်များကို ဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အဂ္ဂသာဝကဖြစ်လိုသူတွေ၊ ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာဖြစ်လိုသူတွေ စသူစသူတို့အတွက်လည်း မိမိတို့ဖြစ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ကာ ဒီပါရမီတွေကို သူ့ကာလအပိုင်းအခြားလိုက်ပြီး ဖြည့်ကျင့်ကြရပါတယ်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓစာပေများအရ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ပါရမီဆယ်ပါးရှိကြောင်း မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပါရမီ ဆယ်ပါးကတော့…
၁။ ဒါနပါရမီ = လှူဒါန်းပေးကမ်း စွန့်ကြဲခြင်း
၂။ သီလပါရမီ = ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါး စသည့် သီလကိုဆောက်တည် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၃။ နိက္ခမပါရမီ = အိမ်ရာခွါရှောင် ရသေ့ရဟန်းဘောင်သို့ ကပ်ရောက်ခြင်း
၄။ ပညာပါရမီ = ပညာကို ဆည်းပူးရှာဖွေ တိုးပွားစေခြင်း
၅။ ၀ီရိယပါရမီ = မတွန့်မဆုတ် အားထုတ်သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် ရဲရဲရင့်ရင့် ကြိုးစားခြင်း
၆။ ခန္တီပါရမီ = အမျက်မထွက် သီးခံခြင်း
၇။ သစ္စာပါရမီ = မှန်ကန်ဖြောင့်မှန်စွာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်း
၈။ မေတ္တာပါရမီ = ကမ္ဘာလောကသားများကို မိမိနှင့်တစ်သားတည်း ချစ်ခြင်း
၉။ အဓိဋ္ဌာနပါရမီ = အပြစ်ကင်းသောအရာ၌ စိတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
၁၀။ ဥပေက္ခာပါရမီ = သူစိမ်းသူကျက် ငဲ့ကွက်မရွေး၊ ချမ်းသာဆင်းရဲမတွေး အလယ်ကြားရှု၍ နေခြင်း
တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (မူလပဏ္ဏာသပါဠိ၊ သီလက္ခန္ဓအဋ္ဌကထာ)
ဒီပါရမီဆယ်ပါးကို အလွယ်မှတ်မိနိုင်စေဖို့ ဆောင်ပုဒ်လေးလုပ်ထားပါတယ်။ ကျက်မှတ်လိုကကျက်မှတ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆောင်။ ဒါ၊ သီ၊ နိက်၊ ခံ၊ ၀ီရယံ၊ သစ္စံ၊ ဓိဋ္ဌာန်ပြု၊ ပညာ၊ မေတ္တာ၊ ဥပေက္ခာ၊ ပေါင်းကာဤဆယ်ခု၊ နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်၊ ရောက်ဖို့ရန်၊ ကျင့်ကြံပါရမီစု။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း ပါရမီတော်များ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို ဆယ်ပါးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြောက်ပါးပဲ ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆယ်ပါးဟု ဖော်ပြသော မဟာယာနကျမ်းများရှိပေမယ့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလာ ပါရမီဆယ်ပါးနှင့် ကွဲပြားပါတယ်။ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာအများကတော့ ပါရမီခြောက်ပါးကိုသာ ပြောဆိုသုံးစွဲဟောပြောကြပါတယ်။ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလာ အဲဒီ ပါရမီခြောက်ပါးကတော့…
၁။ ဒါနပါရမီ = လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်း
၂။ သီလပါရမီ = သီလဆောက်တည် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၃။ ခန္တီပါရမီ = အမျက်မထွက်သီးခံခြင်း
၄။ ၀ီရိယပါရမီ = လုံလ၀ီရိယဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း
၅။ ဈာနပါရမီ = ကသိုဏ်းစသည့်အာရုံကို ရှုကျင့်ခြင်း
၆။ ပညာပါရမီ = ပညာကိုဆည်းပူးရှာဖွေ တိုးပွားစေခြင်း
၂။ ဝေယျာဝေစ္စကိုသိုလ်ဟာ ပုညကြိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း စာပေကဆိုပါတယ်။ ကောင်းသောအကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ကုသိုလ်လို့ ပုညကြိယာဝတ္ထုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အလွယ်နားလည်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ပုညကြိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးရှိပါတယ်။ အဲဒီဆယ်ပါးကတော့…
၁။ ဒါန = ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှု
၂။ သီလ = ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါးစသော သီလဆောက်တည်မှု
၃။ ဘာဝနာ = တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်မှု
၄။ အပစာယာန = အသက်သိက္ခာ ဂုဏ်ဝါကြီးသူအား အရိုအသေပြုမှု
၅။ ဝေယျာဝစ္စ = သူများကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ ကူညီဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးမှု
၆။ ပတ္တိဒါန = မိမိရသော၊ မိမိလုပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အမျှပေးဝေမှု
၇။ ပတ္တာနုမောဒနာ = မိမိသို့ရောက်လာသော ကုသိုလ်အဖို့ တစ်နည်းအားဖြင့် သူများပြုသော ကုသိုလ်အဖို့ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ယူမှု
၈။ ဓမ္မဿဝန = တရားနာယူမှု
၉။ ဓမ္မဒေသနာ = လာဘ်လာဘကို မငဲ့ဘဲ တရားဟောပြောမှု
၁၀။ ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ = အယူဝါဒကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ပြုမှု
တကယ်တော့ ဒီတရားဆယ်ပါးဟာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု မိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်နေကြ အရာတွေပါ။ သတိမမူမိကြဘဲ ဖြစ်နေကြလို့ပါ။ ဒီအဖြေကို ဖတ်ပြီးငါတို့ဟာ နေ့စဉ်ပုညကြိယာဝတ္တုတစ်ခုခုကို လုပ်နေတာပါလားလို့ သတိလေးကပ်ကာ ဆယ်ပါးလုံးပြည့်စုံနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ မေတ္တာဖြင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
။ အချိန် 6/08/2008 12:07:00 PM
၁။ အပြစ်မဲ့သူကို ကာကွယ်လို၍ လိမ်ညာပြောလျှင် အပြစ်ဖြစ်ပါသလား။ လိမ်ညာရမည့်နေရာမှာ ပရိယာယ်သုံး၍ မုသားမဖြစ်အောင် ပြောလို့ရသည်ဟု မှတ်သားဖူးပါသည်။ ရှင်းပြပါဘုန်းဘုန်း။
၂။ အလုပ်ချိန်နဲ့ တခြား အခက်အခဲတွေကြောင့် ၈ ပါးသီလကို ညနေစာမစားတာ တမျိုးချန်ပြီး ကျန်တာတွေ စောင့်လို့ ရပါသလား။ ၇ပါးပဲ စောင့်တာ ကောင်းမကောင်း၊ လုံးဝ မစောင့်တာနဲ့ ထူးမထူး ရှင်းပြပါ။
A. ၁။ ဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကမ္မ၀ါဒသဘောအရ ကံကံရဲ့အကျိုးပေးမှုဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နည်းနည်းချဲ့ပြောရရင် ကံဆိုတာ အလုပ်ကိုပြောတာပါ။ ကိုယ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ ကာယကံ၊ နှုတ်နဲ့ပြောဆိုရတဲ့ ၀စီကံ၊ စိတ်နဲ့ကံစည်တွေးတောတဲ့ မနောကံဆိုတဲ့ ဒီသုံးမျိုးကို အလုပ်လို့ဆိုတာပါ။ စာပေသဘောအရ ကံဆိုတဲ့အလုပ်ကို တိုက်ရိုက်နားလည်အောင်ပြောရရင် စေတနာပါပဲ။ စေတနာကမ္မံ ဘိက္ခဝေ ၀ဒါမိ (ချစ်သားတို့ စေတနာကို ကံဟု ငါဘုရားဟောတော်မူ၏) ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်အတိုင်းပဲ စေတနာကို ကံလို့ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းမယ် စေတနာဆိုရင် ကံဆိုးမယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါမှာ စေတနာ ပါမှု မပါမှုကို လိုက်ပြီး တန်ပြန်သက်ရောက် အကျိုးပေးမှု၊ မပေးမှုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်သာလုပ်လိုက်ရပေမယ့် စေတနာ မပါတဲ့အတွက် တန်ပြန်သက်ရောက် အကျိုးပေးမှု မရှိတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သဘောပေါက်ထားရမှာက စေတနာဟာ ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ မကောင်းတဲ့စေတနာလို့ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြီး လုပ်တဲ့အခါမှာ စေတနာကောင်းပါရင် အကျိုးပေးကောင်းပြီး စေတနာဆိုးပါသွားရင်တော့ အကျိုးပေးဆိုးမယ်ဆိုတာပါ။ လုပ်သာလုပ်လိုက်ရပေမယ့် ဘာစေတနာမှ မပါတဲ့အတွက် ဘာအကျိုးပေးမှုမှ မရှိတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက စေတနာသာ အဓိကကျတယ်ဆိုတာပါ။
မေးခွန်းရှင်ရဲ့ အမေးအတိုင်းပြောရရင် အပြစ်မဲ့သူကို ကာကွယ်လိုလို့ လိမ်ညာပြောဆိုမှုဟာ မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကို ကျူးလွန်ရာရောက်ပေမယ့် စေတနာရည်ရွယ်ချက်က သိက္ခာပုဒ်ကို ကျူးလွန်လိုတဲ့သဘော မဟုတ်ဘဲ သူတပါးကို ကူညီလိုတဲ့ စေတနာဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု မရှိဘူးလို့ပြောရပါမယ်။ ကံမြောက်တဲ့ကျူးလွန်မှု မဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လည်အကျိုးပေးမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကို ကျူးလွန်ရာရောက်တယ်ဆိုတာက မုသာဝါဒါ ဝေရာမဏိ ရဲ့ သဘောက ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိမ်ညာပြောဆိုမှုမှ ရှောင်ကြဉ်တာကို ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီသီလကတော့ ပျက်ဆီးပါတယ်။ သီလညစ်နွမ်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တမင်သက်သက်ကျူးလွန်လိုတဲ့ စေတနာရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့အတွက် သီလသိက္ခာပုဒ် ပျက်ဆီးခြင်းကြောင့် ပြန်လည်အကျိုးပေးမှုကံမမြောက်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ စေတနာပေါ့။
လိမ်ညာရမည့်နေရာမှာ ပရိယာယ်သုံးပြီး မုသားမဖြစ်အောင် ပြောတဲ့အခါမှာလည်း စေတနာရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတော့ မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ မုသာဝါဒကို မကျူးလွန်မိအောင်ဆိုတဲ့ စေတနာက အဓိကဦးတည် နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပရိယာယ်သုံးပြီး ရှောင်လွဲလို့ရပေမယ့် တစ်ခြားစေတနာနဲ့ ပရိယာယ်သုံးပြီး လိမ်ညာမယ်ဆိုရင်တော့ မုသာဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တိုက်ရိုက်လိမ်ညာတာမဟုတ်ပေမယ့် သွယ်ဝိုက်တဲ့လိမ်ညာမှုမျိုး မဖြစ်အောင် စေတနာကောင်းနဲ့ ပရိယာယ်သုံးတတ်ဖို့ပါ။ မာယာပရိယာယ်မဖြစ်ဖို့ သတိပြုရပါမယ်။ လှည့်ပတ်တဲ့ပရိယာယ်ဆိုရင်တော့ စေတနာရည်ရွယ်ချက် ကွာခြားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မုသာဝါဒနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ အထူးသတိပြုပါ။
၂။ ရှစ်ပါးသီလကို စာပေအခေါ်အရ ဥပေါသထသီလလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဥပေါသထသီလဆိုတာ ဥပုသ်နေ့တွေမှာ အထူးစောင့်ထိန်းတဲ့သီလလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ငါးပါးသီလကတော့ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းရမယ့် သီလဖြစ်ပါတယ်။ ဥပေါသထသီလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဥပုသ်နေ့မှာပဲ စောင့်ရမှာလား တစ်ခြားနေ့တွေမှာလည်း စောင့်လို့မရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ စောင့်လို့ရပါတယ်။ စောင့်ခြင်းကြောင့်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူး။ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။ ရှစ်ပါးသီလမှမဟုတ်ပါဘူး။ စောင့်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုရင်တွေစောင့်တဲ့ ဆယ်ပါးသီလလည်း လူပုဂ္ဂိုလ်များ စောင့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် စောင့်ထိန်းနိုင်သမျှ စောင့်ထိန်းလို့ ရပါတယ်။ ငါးပါးသီလကတော့ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာပေါက် စောင့်ထိန်းရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားသီလတွေကိုတော့ စောင့်နိုင်သမျှ အသိစိတ်လေးနဲ့ထိန်းပြီး စောင့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဘုရားရှေ့မှာ၊ သံဃာတော်တွေရဲ့အထံတော်မှာ အာမဘန္တေခံ၊ ရှစ်ပါးသီလကို လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်းပါမယ်လို့ ကတိတွေပြုပြီးမှ မလုံခြုံဘူးဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ အထူးသိထားရမှာက သီလဟာ တစ်ပါးကျူးလွန်တာနဲ့ ကျန်တဲ့သီလတွေပါ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်ဆီးသွားတဲ့သီလတွေ ရှိပေမယ့် ကျန်တဲ့သီလတွေ လုံခြုံနေမယ်ဆိုရင် လုံခြုံနေတဲ့သီလအကျိုးကတော့ ရှိနေပါတယ်။ မေးခွန်းရှင်ရဲ့ အမေးထဲကလို လုံးဝမစောင့်တာနဲ့စာလျှင် စောင့်နိုင်သမျှ စောင့်တာက ပိုကောင်းပါတယ်လို့ ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။